Munaasabadaan ay xilalka kula wareegayeen gudoomiyihii hore ee waxbarashada Gobalka Nugaal iyo Gudoomiyaha Cusub ayaa waxaa ay maantay ka dhacday xarunta gudoonka waxbarashada gobalka Nugaal ee Magaalada Garoowe.
Munaasabadaan ayaa waxaa goob ka agaasimaha Guud ee Wasaaradda waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Puntland Maxamed Cali Faarax,Gudoonka waxbarashada ee gobalka Macalimiin,Maamulayaal iyo Arday.
Read more about (Sawirro) Gudoomiyaha Waxbarashada Gobalka Nugaal oo xilka la wareegay
Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug maalmihi la soo dhaafay waxaa ka socday kulamo looga halayay Amniga maagaalada ee labada dhinac.
kulamadan ayaa waxaa isugu yimid Maamulada labada dhinac ee Puntland iyo Galmudug ,waxaana ka soo qayb galay xubno ka socday Beesha caalamka ,dowladda Fadaraalka Soomaaliya iyo Bulshada Rayidka ah.
Wax yaabhii ka soo baxay kulamadaasi ayaa waxaa kamid ahaa sidii Amniga Gaalkacyo labada dhinac ay u adkeen lahaayeen iyo in laga wada tashado sidii uu gobolka mudug uu u heli laahaa Amni buuxa oo laysku halayn karo .
Read more about (Dhagayso) Maxaa ka soo baxay kulankii Amniga Ee Galmudug iyo Puntland ?
K/Waqooyi oo Mareykanka ku eedeeysay sii hurinta xiisada gacanka Kuuriya
Kuuriyada Waqooyi ayaa Mareykanka ku eedeeysay in uu isku dayayo in uu minjaxaabiyo dadaalka lagu lagu doonayo in xiriirka labada Kuuriya.
Read more about K/Waqooyi oo Mareykanka ku eedeeysay sii hurinta xiisada gacanka Kuuriya
Gudiga dhismaha wadada Ceeldaahir iyo Ceerigaabo ayaa maanta lagu wareejiyay Xoolo nool oo isgu jira Geel iyo Ari.
Shacabka ku dhaqan deegaanada Carawayn iyo Tiicaanyo ayaa Gudiga dhismaha Wadada Ceeldaahir ku wareejiyay 4 Neef oo Geel ah iyo 50 Ari ah oo ay uga qayb qaadanayaan dhismaha Wadadan.
Waxgaradka deegaanka ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan taageerada iyo garab istaaga gudiga ku howlan dhismaha Wadadan ayna kubixin doonaan muruq iyo maal wax kasta oo ay awoodaan.
Read more about Gudiga Dhismaha Wadada Ceel daahir iyo Ceerigaabo Oo lagu Wareejiyay Maanta Xoolo nool oo isugu jira Geel iyo Ari
Xisbiga haya talada Shiinaha oo soo jeediyay in madaxwayne Xi uu xilka sii hayo
Xisbiga Shuuciga ah ee haya talada dalka Shiinaha ayaa soo jeediyay isbadal lagu sameeyo dastuurka dalkaasi.
Read more about Xisbiga haya talada Shiinaha oo soo jeediyay in madaxwayne Xi uu xilka sii hayo
Madaxweyne Gaas ayaa wareegto maanta kasoo baxday xafiiskiia waxaa lagu magacaabay Agaasimaha Guud iyo Agaasime Waaxeed ee Wasaaradda Amniga iyo DDR Dawladda Puntland.
Waxaa agaasimaha guud loo magacabay, Xaaji Cabdulle loo Magcaabay Agaasimaha Guud Ee Wasaaradda Amniga iyo DDR
Sidoo kale, Maxamed Iimaan Cabdulaahi ayaa loo Magcaabay Agaasimaha Waaxda Miinno Saarka Wasaaradda Amniga iyo DDR.
Read more about Madaxweyne Gaas oo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda amniga iyo agaasimaha miino baarista.
Read more about Afduub iyo kufsi loo geysanayo gabdhaha yaryar oo si aad ah looga dareemay gobolada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Read more about Ciidamada ilaalada Madaxweyne Gaas Oo Garoowe ku Dhaawacay Wariye ka Tirsan Tvga Jubaland
Qaar kamid ah Xildhibanada Baarlamaanka soomaaliya ayaa Dowladda Fadaraalka ku dhaliilay in ay ka gaabisay in lasugo Amniga shacabka.
Xildhibaan Xuseen Sheekh oo kamid ah golaha Aqalka Sare ayaa sheegay in Xukuumada Soomaaliya ay ku canaa nanayaan in ay shaqa deeda ay qabsato oo shacabka Soomaaliyeed Amaankooda ay balan qaado.
Xildhibaanka ayaa sheegay in ay jirto dabacsanaan dhanka Amniga ah taas oo keentay in dirayskii Ciidamada Nabad sugida iyo kaararkii Aqoonsiga ee Ciidamada lagu soogalo Madaxtooyada .
Read more about (Dhagayso) Xildhibaan Xuseen Sheekh ” Al-shabaab in ay yimaadaan Madaxtoyada horteeda waxa ay muujinaysaa in ay jirto dabacsanaan xoogan
(Dhagayso)+Sawirro:-Adeega Fiber Optic ee Puntland oo markii u horaysay xariga laga jaray
Shirkada isgaarsiinta ee Golis Telcom ayaa Magaalada Bosaso waxay ku daah furtay Adeega Fiber Optic ,kaas oo xawaarihiisa uu aad u dheereeyo lagana hirgaliyay dhawaan Puntland.
Read more about (Dhagayso)+Sawirro:-Adeega Fiber Optic ee Puntland oo markii u horaysay xariga laga jaray